Welcome to Aayaha Nolosha » GUUSHII DHAMBAAL KALGACAL.
GUUSHII DHAMBAAL KALGACAL.
Waxa aad iga hantisaa salaan ka timid qalbi naxariis ka buuxdo, niyad jacayl hor kacay, maan aad dhex taalo, iyo quluub aadan ka go’i karin.
Waan hubaa in aad soo xasuusan habeenkii isugu keen dambaysay, inaga oo isla socona reerkiinu ku soo weerareen, ilaa hadeerna aad silsilad lugaha uga xiran tahay.
Gacaliso waan cabiri karaa jirdilka iyo dhibka lagugu hayo, mana haysatid xoriyad aad isku maamusho.
Waxaad ogaataa in beerkaygu gubanayo, jirkaygu dareemayo olol, oo maskaxdayduna ii sawirayso waxa kugu dhacaya.
Gacaliso Ilaahay ayaan ka rajaynaynaa in uu maalin un ina tuso, miro dhalka Jacaylkeena aan u soo marnay silaca iyo saxariirta sanooyinka qaatay.
Waad ogtahay in la isku dayay in adduunka la iga diro, si caashaqa inoo dhaxeeya meesha uu uga baxo.
Ikraan Abaayo ku noolow xasuusta macaan ee Jacaylkeena, ka dhur sug rajada xag Alle ka imaanaysa, hana ka quusan hamigeenii, lahow niyad bir ah, isku kalsoonow, waxaadna aamintaa in xaqa jacaylka maalin un uu dilaaci doono.
Gabadha aan waraaqda kuugu soo dhiibay ayaa ii sheegtay in silsiladdii lugaha lagaaga xiray ay kuu gaysatay dhaawacyo culus oo ka muuqda oogadaada..dhammaan dareemayaasha jirkayga waa mid xanuun ba’an ku haysa, ogow in aan maalin un hantin karno guusha xubiga aan muddada dheer la soo daala dhacaynay, oo maanta aad u katiinadaysan tahay…Ilaahay ha inala jiro, cadawgana ha naga qabto, is arag farxad leh oo horseed u noqda guusha Jacaylkeena.
Markii ay dhambaalkaas Kalgacal uu gaaray oo akhrisatay iyadoo tiro ka badan saddex jeer ku celcelisay akhriska ayay go’aansatay inay dhambaal jawaab celin ah u dirto gacaliyaheed, waxayna u qortay sudan:
Gacaliye, Qalbiga ayaad harsataa, xasuustaada ayaan quutaa habeen iyo maalin, waxaan ku fikiraa aragtidaada, jacaylka aan kuu qabana waa mid igu sii fidaya maalinba maalinta ka dambeysa.
Dhaawacyada jirkeyga gaaray iyo nabarada ku yaala oogadeyda, waxa igala daran walwalka iyo calool xumada aan dareemayo in waagu kuugu baryo gabalkuna kuugu dhaco.
Ducaale waxaad tahay shaqsi qalbigeyga buuro waaweyn ka dhistay, naf aan si dhab ah u jeclaaday, ruux aan kalgacal xaqiiq ah u qaaday, shaqsi uusan iga ba’ayn xubiga aan u hayo..
Haddaan ahay Ikraan waxaan kugu dhiirigelinayaa in aadan iga walwalin, in aad iska iloowdo xusuusta danqashada leh oo aad ku badalato mida macaan ee maalmihii uu jaceylkeenu miro dhalay..
Naftaada ku beer wanaag, naxli iyo ka sifee xumaan, niyaddaada ka xoree walaac oo ku noolee dhiiranaan.
Waan hubaa marka aad qaadato waanooyinka aan kor kuugu soo sheegay, in aad noqon doonto shaqsi ka guuleystay waayaha iyo kuwa garabka siinaya..
Ducaale Ogow habeen iyo maalin in aan ku duceysto, inaga oo horumar ka gaarnay Jaceylkeena, aniga oo ka soo baxay xabisigii iyo silsilada lugaha iiga xiran, oo inta aan is helno dadabgalnay arooskeenana ay saaxiibadeen iyo kuwa u ololeeya Xaquuqda Jaceylka ay ka qayb qaadanayaan xaflad weyna la inoo dhigay.
Gacaliye ha isu dhiibin waayaha, oo ha ka baqan cadowgeena, ha ka quusan naxariista Alle, yeyna kula noqon wax lagu waari dhibta oo aan waligeed laga gudbeyn. ..waxaadna aamintaa in niyada birta ah aan la dhaawici karin, noqo Xadiid aan la mari karin.
Gacaliye Ducaale warqaddan oo ah jawaabtii dhambaalkii Kalgacalka ee aad ii soo dirtay, ayaan kuugu soo dhiibey gabadhii ii keentay dhambaalkii hore..
Waxaan inoo rajeynayaa in maalin un aan arki doono guusha Jaceylkeena,damaashaad iyo Xaflad aan loo kala harin loo sameynayo.
By Gacalisadaa Ikraan
Dhibaatooyinkii ay u gaysatay sisiladdii ay ku xirneyd, ayaa labadii lugood dhawaacyo culus ka soo gaareen, taas oo laga cabsi qabay in ay naafanimo keento.
Warkaa ayay isla dhex marayeen dadkii xaafadda ay magaalada Muqdisho ka daganaayeen iyo guud ahaan xaafadaha Gobalka Banaadir.
Waxa uu warku gaaray meelo fog fog, cid kasta oo maqasha ayaa u garaabeysay, Jaceylka daacada ah ee labadan qof.
Mar kasta oo Ikraan lagu yiraahdo.
“Waa lagaa furi birta kugu xiran ee maka hari ninkaa aan kuu diidanahay?”.
Waxa ay ku jawaabi jirtay.
“Ka hari maayo inta aan noolahay, wed lee nakala kaxayn kara, ee sidaad doontaan i yeela”.
Arrintii waxa ay sii fiddo, sii baahdo, meel walba Jaceyl looga sheekaysto ayuu noqday, waxa uuna warkii gaaray habaryarteed Safiya oo ku nooleyd dalka Mareykanka.
Safiya waxa ay ahayd qofka ay Qoysku ku tiirsanaayeen dhaqaalo ahaan iyada ayaana biili jirtay.
Habaryarteed waxay ahayd qof wax bartey oo mutacalimad ah, waxaana intaa dheer in Ikraan ay ahayd qofka ay reerka ugu Jeclayd markii ay yaraydna ay iyadu hayn jirtay.
Safiya ayaa Mareykankii ka soo baxday iyada oo aan reerkii soo wargalin ayay amin fiid ah ku garaacday albaabka..qofna ma ay salaamin oo markii laga furayba waxay ku qaylisay.
“Aaway Ikraan..Aaway Ikraan?”.
Cunug yar ayaa u hor qaaday qolkii yaraa ee ay silsiladda kula xirneyd……waxa ayna isku duubtey Ikraan oo xiran iyada oo ku dul ooynaysa.
Walaasheed iyo reerkii oo dhan ayaa ku soo xoomay..
“Goormaad timid……maxaadse noo soo wargalin weyday?”.
Dheg uma ay dhigin ee waxay ku qaylisay.
“Hadda keena furaha..ii keena furaha”.
si degdeg ah ayaana looga furay.
Safiya waxa ay sheegtay in ay isku buuqsan tahay, caawana ayan cidna la hadlaynin oo ay qol wada seexanayaan iyada iyo Ikraan.
Habeenkaa ayay waraysatey waxa ayna ogaatay in sababta wiilka loo diidayo ay tahay saboolnimo, waxa ayna ka ballanqaaday Ikraan in ay arooskooda bixinayso guri heer sare ahna u dhigayso, waxayna intaa ku dartay in ay u gadi doonto Gaari Bas ah oo biilka ay ka helaan.
Subaxdiina waxa ay shirisey reerkii oo dhan, waxa ayna u sheegtay go’aankeeda iyaga oo kuwada raacay maadaama aan laga hor imaan karin.
Hooyo Safiya waxa ay ka codsatay Ikraan in ay wiilka wargaliso ugana yeerto, si uu ugu diyaargaroobo aroos.
Marka ayey u qortey warqad ay ku wargelinayso.
Ku: Gacaliyahayga Ducaale.
Salaan qiimo badan oo xambaarsan Jaceyl run ah, Kalgacal Saafi ah, Xubi daacad ah, Cishqi xaqiiq ah..kadib.
Waxaan hubaa in ay lama filaan kugu noqon doonto wargelintan, taas oo ah in aan maanta xor ka ahay, silsiladii nabarada dhaawaca ah ii gaysatey iyo qolkii yaraa ee aan ku xirnaa, waxaana intaa dheer in Jaceylkeenii guuleystay..arooskeenuna uu dhici doono todobaadka dambe
sidaa darteed iigu imoow gurigii lagaa ilaalin jirey, oo qoyskayga oo dhan ay maanta diyaar u yihiin in ay kuu soo dhaweeyaan si heer sare ah..
Inkastoo uu aad ula yaabay warkaan, haddana aakhirkii waa uu tagey isga oo aad u faraxsan..waxaana halkaa ka dhashay guushii dhambaal kalgacal oo ayna jirin cid filaysay.
Tani waxa ay caddeyn u tahay haddii labada qof ay si dhab ah isu Jacel yihiin, isla markaana midna ayna khiyaamo u qarsooneyn sida aakhirka ay u guulasanayaan, cadow walbana uga adkaan karaan ugu dambaynta, waxaana qayb ka ah guushaas isku kolsoonida aan niyad jabka lahayn ee waheshanaysa samirka iyo dulqaadka.
W/Q: Maxamed Faarax Duurgal